တစ်ကြိမ်တွင် Hotspot Booster နှင့် Turbo Booster များစွာကို လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား?
မရပါ၊ တစ်မျိုးစီအတွက် လက်ရှိသုံးစွဲနေမှု သက်တမ်း သို့မဟုတ် ကိုယ်တာ မကုန်သေးမီတွက် နောက်ထပ် အသစ်လျှောက်ထားခြင်း မပြုနိုင်ပါ။ ဥပမာ သင်သည် Hotspot Boosters များစွာကို တစ်ကြိမ်တည်း မလျှောက်ထားနိုင်ပါ။ Booster နှစ်မျိုးစလုံးကို လျှောက်ထားခြင်းဖြင့် မိုဘိုင်းဝိုင်ဖိုင် သုံးစွဲမှုမှန်သမျှကို Hotspot Booster ထဲမှ သုံးသွားမည်ဖြစ်ပြီး မြန်နှုန်းကန့်သတ်မှုမရှိဘဲ ဒေတာကိုယ်တာကို သုံးနိုင်ပါမည်
အခြား အပိုထပ်ဆောင်းအစီအစဉ်များသို့ ပြောင်းလိုက်ပါက သို့မဟုတ် GX30 ကို မလျှောက်ထားတော့ပါက Hotspot Booster နှင့် Turbo Booster တို့၏ ကိုယ်တာနှင့် သက်တမ်းတို့မှာ မည်သို့ဖြစ်သွားမည်လဲ?
လက်ကျန် ကိုယ်တာများနှင့် သက်တမ်းတို့ကို ပယ်ဖျက်သွားပါမည်။ မသုံးဘဲကျန်နေသော ကိုယ်တာ သို့မဟုတ် သက်တမ်းအတွက် ငွေပြန်အမ်းမည် မဟုတ်ပါ
Turbo Booster နှင့် Hotspot Booster ကို မည်သို့လျှောက်ထားရမည်လဲ?
- MYUmobile အပလီကေးရှင်း - Add-Ons မှတစ်ဆင့်
- UMB- *118*1*2# သို့ခေါ်ပါ
- SMS- ON TURBO (Turbo Booster အတွက်) သို့မဟုတ် ON HOTSPOT (Hotspot Booster အတွက်) ကို 28118 သို့ ပို့ပါ
လက်ရှိ ပုံမှန်အစီအစဉ်3ရက်စာ 1GB အတွက် RM10 အား ဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့၊ Hotspot Booster နှင့် Turbor Booster တို့နှင့်အတူ လက်ရှိ ပုံမှန်အစီအစဉ်ကိုလည်း ဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အစီအစဉ်3မျိုးစလုံး၏ အကျုံးဝင်မှုသည် လျှောက်ထားမှု အောင်မြင်မှသာ ရရှိမည်ကို သတိပြုပါ။ သင့်အစီအစဉ်တွင် အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာကိုယ်တာ ပါဝင်ပြီး ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ပုံမှန်အစီအစဉ်အစား Turbo Booster ကိုသာ လျှောက်ထားရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်